Soe Min Aung မင်း
စက်တွေ အရစ်ပြုန်းကုန်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ဘာလုပ်သင့်လဲ၊ အဖြေတော့ ရှာရလိမ့်မယ်
စက်တွေကို စစ်ဆေးရလိမ့်မယ်၊ စက်တွေက စက်လို တဂျုတ်ဂျုတ်လည်ပတ် စက်အနောက်လိုက်သွား
စက်ဖြစ်သွားသလား စက်ပျက်သွားသလား မေးတော့လည်း မေးချင်တယ် ဖြေတော့လည်း မဖြေချင်ဘူး
စက်ဟာ အရိုး သူမီးလောင်မှာပဲ စက်ဟာ အသား သူညှော်မှာပဲ စက်ဟာ အကြော စက်ဟာ အူ စက်ဟာ ခြေရာ စက်အကြောင်းသိရင် စက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် စက်ကို နားလည်လိမ့်မယ် စက်အကြောင်းမသိတော့ စက်ကို လုံးလုံးမသိ ကိုယ်တိုင်တောင် စက်ဖြစ်မှန်းမသိ စက်က စက်ကို စက်ပြန်လုပ်ချင်နေတယ် စက်က ပြုတ်ကျသွားတယ် စက်က ပြန်ထတယ် စက်က အမြှောင်းလည်း ထ
စက်က လျှာတွေ ပူ အာခေါင်ခြောက် စက်က မျက်စိတွေ ကျိန်း စက်က ဦးနှောက်ကုပ်ကပ် စက်က ဂေါက် စက်က အာဘာရာဘာ စက်က ဘာတွေဖြစ် စက်မင်နီဝိုင်း စက်မင်ပြာပြာ စက်ရေးရေး
စက်ကို လက်ဆွဲခေါ်မှာလား စက်က တရွတ်တိုက် စက်ပုံကြား စက်ညည်းငွေ့ စက်က ညည်းအငွေ့အသက်နဲ့လည်း စက်ဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံချင်ပါတယ်ဆို စက်က ညတိုင်း စိတ္တဇ စက်က အော်သံတွေ ကြား စက်တွေ့ရှိချက်က အပေါက် စက်မသာ စက်ဆိုး စက်ကော်ဇောခင်းတဲ့ လမ်းလျှောက်ချင်သေးတယ် စက်ရုပ်သေး စက်ညောင်နာ စက်ဆုပ် စက် ပက်စက်တဲ့ ဥာဉ် စက် စက် စက် စက် . . . စက် . . . စက် ... စက် ... စက် စက်က နျူကလီးယားကို အမှုန်းချေပစ်ချင်တယ် စက်က မွေးဖွားမှုရှိတယ်ဆိုတာ သိတယ် စက်က နာလို့ စက်က ထစ် စက်အ စက်ဆိုးပုန်း စက်အိပ်မက်
စက်ချောက် စက်ဝင်္ကပါ စက်ကျောမှီရပ်နေတာ စက်ကို ဘယ်သူမှ မသိ စက်အနှိမ်ခံ စက်ညှဉ်းဆဲခံ
စက် တဂျောင်းဂျောင်း စက်တအုန်းအုန်း စက်တဒိုင်းဒိုင်း ... စက် ခွေး စက် ... စက် ... ခွေး စက်... စက်သိုက် စက်နဲ့ စပ် စက်က မြင်တယ် စက်က ကြားတယ် စက်က သိတယ် စက်က တိတ်တိတ်လည်း နေတတ်တယ် စက်ချောင်း စက်မြောင်း စက်ချောင်းမြောင်း စက်ရေးစက်ရာ စက်စက် ဆက်စပ်